Kohakutou Crystal Gummy Candy (Recipe Flagored) - Sugar Geek Show - Nacnac
Macmacaanka nacnaca Kohakutou
Kohakutou waa nacnac Jabbaan ah oo laga sameeyay Agar Agar waxaana loo tarjumay 'nacnac amber'. Kohakutou waxaa lagu sameeyaa adoo ku shubaya jelly dhadhan saxan oo u oggolaaneysa inay dejiso ka hor inta aan la jarin ama la jeexin qaababka muraayadaha. Nacnaca ayaa soo baxa qolof dibedda ah oo ciriiri ah dhawr maalmood ka dib laakiin weli si farxad leh ayuu ugu ruugaa gudaha.
Waxaan markii ugu horreysay ku arkay cuntadan Emmymade kanaalka Japan kanaalka YouTube . Waan ku faraxsanahay indha sarcaadka waxaanan u maleynayay inay ku fiicnaan doonaan keega geode.
Sidee u sameysaa Kohakutou?
Sameynta kohakutou runti waa wax fudud. Waxaad ku milaysaa agarka agarka biyaha waxaadna u karisaa karkar. Tani way ka duwan tahay isticmaalka gelatin, weligaa ma karkarin doontid gelatin, ubax uun baa ka dibna milaan.
Kadib waxaad ku dari doontaa sonkorta. U oggolow isku daridda sonkorta 2-3 daqiiqo. Waxaa jira sonkor badan sababta oo ah laba sababood.
Tani waa nacnac. Nacnac badanaa waa mid aad u macaan oo sonkor ka buuxo
Waxaa loo baahan yahay in la helo qadar sare oo sonkor ah si loo bilaabo silsiladda silsiladaysan ee kansarka
Isku dar isku darka dabka oo ku dar xoogaa dhadhan ah. Waxaan adeegsaday dhadhanka nacnaca cudbiga maxaa yeelay ma aanan dooneynin inaan midabeeyo jelly-ga oo nacnaca suufka ayaa cad. Waxaan sidoo kale ku daray qadar yar oo aashitada ah si aan ugu daro wax yar oo nacnac nacnaca ah oo aan u jaro dhadhanka macaan.
Ku shub sonkorta isku darka qiyaastii 1/2 ″ qaro weel si khafiif ah u saliideysan. Waxaan ku dhammaaday isticmaalka laba konteenar. Ku dar dhawr dhibic oo midabaynta cuntada dareeraha ah oo isku wareeji.
strawberries jeedal kareem malak cunno keega
Waxaan ogaaday in midabku jecel yahay inuu ku fariisto jelly dusheeda sidaa darteed waa inaan u isticmaalaa jeexjeexa nooc ka mid ah wareegyada ka socda xagga sare ee jelly ilaa hoose. Waxaan go aansaday inaanan si buuxda isugu darin maxaa yeelay waxaan ka helay swirls.
Isku walaaq geli qaboojiyaha oo u daa qabow dhawr saacadood. Aniga ayaa dhigay hal saac oo kaliya.
Sidee u samaysaa kristantarro la cuni karo?
Marka isku darkaaga la dejiyo, waad kala soo bixi kartaa weelka waxaadna ku dhex googooyn kartaa qaababka kiristaalo.
Waxaan bilaabay inaan jelkeyga u jarjaro xariijimo, ka dibna 1 rect laydi koreeya. Waxaan u adeegsaday mindi mindi ku goysay caarada dhibic sidaa darteed waxay u egtahay qaab muuqaal ah.
Qaybaha la jaray ayaan ku ridayaa saxaarad sidoo kale si aan hadhow u isticmaalo. Qashin la'aan!
Markay kristantarradu cusub yihiin, iyagu waa kuwo aad u cad oo aad u qurux badan. Aad u adag oo quruxsan hufan. Si daacadnimo ah ayaad ugu isticmaali kartaa keega sidan oo kale laakiin waxay bilaabeen inay si dhakhso leh ugu helaan maqaar baalal ah.
karinta keega strawberry laga soo xoq gelatin lahayn
Hal maalin kadib, tani waa sida ay u ekaayeen.
Muxuu dhadhamiyaa Kohakutou?
Waxaan dhamaanteen u dhimaneynay inaan isku dayno nacnaca madadaalada oo runtii waxaan moodayay inay runti fiicneyd. Dareenku maaha mid u calalisan sida nacnaca xanjada caadiga ah laakiin weli aad buu u wanaagsan yahay. Waan jeclahay farqiga u dhexeeya xarunta ciridka iyo dibedda ciriiriga ah.
Kiristaaloashu waxay sii wadi doonaan inay helaan qolof dhumuc leh dhawr maalmood. Waxaan ku rinjiray geesahayga taabasho ah rinjiga dahabka oo waxay moodeen inay runtii u muuqdeen kuwo qurux badan.
Kiristaaladani la cuni karo waxay layaab ku noqon doonaan keegga geode ama sida Nicmada. Waxaan hayaa fikrado aad u tiro badan! Qaybta ugu wanaagsan ee gummies-kani waa inay runtii qaali yihiin in la sameeyo. Waxaan adeegsaday astaanta lagu taliyay ee agar agar (sumadda taleefanka) waxayna ahayd qiyaastii .80 baakad. Way ka raqiisan tahay isomalt aadna way ugu sahlan tahay ilkaha.
duncan hines maaddooyinka keega jilicsan ee jilicsan
Intee in le'eg ayuu nacnaca Kohakutou soconayaa?
Waxaad ku keydin kartaa nacnaca weel hawo kulul leh heerkulka qolka illaa laba toddobaad ka hor intaysan bilaabin inay qalalaan oo ay aad u adkaadaan.
Marabtaa fikrado badan oo nacnac xanjo ah? Kuwaas iska hubi
Recipe Real Gummy Bear
Kohakutou waa nacnac Japanese ah oo laga sameeyay Agar Agar. Waxaa lagu sameeyaa adoo ku shubaya jelly dhadhan saxan saxan una oggolaanaya inay dhigato ka hor inta aan la goyn ama la jeexin qaababka muraayadaha. Nacnaca ayaa soo baxa qolof dibedda ah oo ciriiri ah dhawr maalmood ka dib laakiin weli si farxad leh ayuu ugu ruugaa gudaha. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:6 daqiiqado qaboojinta:laba saacado Kalori:53kcal
▢12 garaam (12 garaam) jelly (sumadda taleefanka)
▢14 ounces (397 g) biyo qabow
▢24 ounces (680 g) sonkorta
▢1/4 qaaddo shaaha (1/4 qaaddo shaaha) nacnac dhadhan
▢1/8 qaaddo shaaha (1/8 qaaddo shaaha) aashitada ikhtiyaari ah - wuxuu ku darayaa dhadhan dhadhan ah
▢3 dhibco (3 dhibco) midabaynta cuntada dareeraha ah Waxaan adeegsaday midabbo cirka loo yaqaan 'Americolor'
Ku rid biyo qabow digsi dhexdhexaad ah
Ku daadi budada agar agar biyaha dusheeda oo ha u nuugo 5 daqiiqo
Isku dar iskudarka isku kari ilaa 2-3 daqiiqadood si joogto ah ugu walaaq spatula
Ku daadi sonkortaada kuna sii wad cunto karinta 2-3 daqiiqo oo kale
Ka qaad dabka kuna dar nacnac nacnac iyo aashito
Ku shub isku darka saxanka kuleylka leh ee dhalada ah oo si khafiif ah loo saliiday si looga ilaaliyo ku dhegidda
Ku dar dhawr dhibic oo dareeraha cuntada midabaynta ah dusha kuna wareeji buraash caday. Si buuxda ayaad isugu dari kartaa ama uga tagi kartaa xariijimo
Weelka dhig qaboojiyaha ilaa 2-3 saacadood illaa inta laga dejinayo
Xanjada ka soo saar weelka oo ku jarjar qaababka muraayadda adoo adeegsanaya mindi af badan
Dhig gummiesta muraayadda ah xaashida buskudka dusha ka daboolan kuna qallaji heerkulka qolka illaa 2-3 maalmood ilaa qolof adag ka samaysmaan banaanka.
Nooca lagu taliyay ee Agar Agar waa sumadda 'taleefanka'. Haddii aad isticmaasho nooc kale oo Agar Agar ah natiijooyinkaagu isku mid ma noqon karaan. Natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, ka akhriso boostada iyo habka loo diyaariyo si looga fogaado khaladaadka guud. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo farayn (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. Cabbiraadaha mitirka (garaam) ayaa la heli karaa adoo gujinaya sanduuqa yar ee ka hooseeya maaddooyinka ku jira kaarka karinta ee ku suntan 'metric' Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. Isku day inaad isticmaasho isla maaddooyinka ay ku baaqeyso cuntada. Haddii ay qasab tahay inaad beddel sameyso, la soco in karintani aysan isku mid u soo bixi doonin. Waxaan isku dayaa inaan taxo bedelka meesha ay suurta gal tahay.
U adeegida:5kiristaalo|Kalori:53kcal(3%)|Kaarboohaydraytyada:14g(5%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:1g(laba%)|Dufan Dufan:1g(5%)|Sodium:1mg|Kalibaalium:3mg|Fiber:1g(4%)|Sonkor:14g(16%)|Kaalshiyamka:labamg|Bir:1mg(6%)
sida loo sameeyo jaceylka talaabo talaabo ah
sida qofka looga dhigo qof jecel
sida looga sameeyo buuxinta keega miraha la qaboojiyey